Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Maanta Oo Arbaco Ah.
Weeraryahanka Arsenal Alexis Sanchez ayaa u isticmaalaya dalab 400 kun ginni isbuucii ah oo uu ka helay Shiinaha inuu Gunners kaga helo qandaraas cusub oo ay ku bixinayaan mushaharka uu dalbanayo. (Daily Mail)
Weeraryahanka Liverpool Roberto Firmino ayaa qandaraaskiisa waxaa lagu daray sharuud lidi ku ah Arsenal iyadoo 25 jirkaan reer Brazil qandaraaskiisa lagu burburin karo 82.6 milyan ginni waxaana lacagtaas ay u furan tahay dhamaan kooxaha dunida marka laga reebo Arsenal. (Independent)
West Ham ayaa qorsheyneysa inay u dhaqaaqdo xiddiga khadka dhexe ee Manchester United Marouane Fellaini marka uu suuqa kala iibsiga dib u furmo bisha soo soocta. (Daily Telegraph)
Kooxda West Ham ayaa sidoo kale amaah ku doonaysa goolhayaha 29 jirka Chelsea Asmir Begovic. (The Sun)
Xiddigii h--e ee England Frank Lampard ayaa la filayaa inuu qeyb ka noqdo shaqaalaha tababarka xulka qaranka Ingariiska ka dib bixitaankii caawiyaha tababare Sammy Lee. (Daily Star)
Chelsea, Manchester City iyo Ajax ayaa dhamaantood waxa ay doonayaan 13 jirka Celtic Karamoko Dembele, iyadoo xiriirada Scotland iyo England ay u tartamayaan wadankii uu matali lahaa. (Independent)
Everton ayaa wadahadalo la yeelatay Manchester United oo ku aadan saxiixa xiddiga reer Holland Memphis Depay iyo xiddiga Faransiiska Moran Schneiderlin iyadoo uu kulankaan dhacay ka hor ciyaartoodii Axadii ee Goodison Park. (Scottish Sun)
Everton ayaa sidoo kale dooneysa 21 jirka weerarka ka ciyaara ee kooxda Bolton Zach Clough. (The Sun)
Waxaana ay diyaar u yihiin inay iska iibiyaan xiddiga khadka dhexe Tom Cleverley bisha Janaayo iyadoo dhowr kooxood ay ka warqabaan in 27 jirka reer England uu suuqa kala iibsiga saaran yahay. (Daily Mirror)
Middlesbrough ayaa sheegtay inay 35 milyan ginni ku doonayaan daafaca Ben Gibson oo 23 sanno jir ah si ay meesha uga saaraan xiisaha kooxda hogaamineysa Premier League ee Chelsea. (Daily Mirror)
Manchester City ayaa xiiseyneysa saxiixa daafaca bidix ee Fulham Ryan Sessegnon oo 16 sanno jir ah kaasoo sidoo kale ay dalab 3 milyan ginni ah ka soo gudbisay Arsenal. (Daily Mail)
Tottenham ayaa kalsooni ku qabta inay qandaraas cusub ka saxiixi doonaan daafacooda Toby Alderweireld ka hor inta aysan kooxna bixinin 25ka milyan ginni ee lagu burburin karo qandaraaska 27 jirkaan. (Daily Telegraph)
AC Milan ayaa kula tartameysa Chelsea saxiixa xiddiga Fiorentina Milan Bedelj oo 27 sanno jir ah kaasoo qandaraaskiisa ay uga harsan tahay 18 bilood. (talkSPORT)
Weeraryahanka Arsenal Olivier Giroud ayaana ka tagi doonin kooxda bisha Janaayo marka uu furmo suuqa kala iibsiga sida uu sheegay wakiilka 30 jirkaan. (Daily Express)
Chelsea ayaa wajaheysa tartan uga yimaada Atletico Madrid oo la xiriisa saxiixa daafaca bidix ee Napoli iyo xulka Algeria 25 jirka Faouzi Ghoulam. (Calciomercato)
Barcelona ayaa iska diiday fursad ay kula wareegi laheyd xiddiga Croatia Luka Modric sannadii 2008 ka hor inta uusan 31 jirkaan khadka dhexe oo haatan jooga Real Madrid ku biirin Tottenham. (ESPN)
Wax Walba Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Isku Aadka Wareega 16ka Champions League. Waqtiga La Qabayo, Halka Aad Kala Socon Karto & Kooxaha U Soo Baxay?
Waxaa caawa la ciyaarayaa kulamadii ugu danbeysay ee wareega group-yada Champions League ee xilli ciyaareedkan iyadoo si dhab ah loo xaqiijin doono 16ka kooxood ee u soo gudbay wareega xiga iyo weliba kooxaha ku soo kala baxay kaalimaha 1aad iyo 2aad.
Laakiin goormaa ayaa la qabanayaa isku aadka wareega 16ka Champions League?
Wax walba oo aad ugu baahan tahay inaad ka ogaato ayaan halkaan hoose kuugu soo koobnay.
Goormaa la qabanayaa isku aadka wareega 16ka?Isku aadka wareega 16ka Champions League waxa uu dhacayaa maalinta Isniinta ee 12ka December Saacada Geeska Afrika marka ay tahay 2pm, iyadoo lagu qaban doono magaalada Nyon ee dalka Switzerland.
Halkeed kala socon kartaa?Isku aadka waxaa baahin doona Sky Sports News iyo beIN Sports laakiin haddii aadan u dhaweyn telefishin, anaga ayaa si toos ah kula socodsiin doonaa isku aadka iyo wax walba oo ku saaban haddii Eebe idmo.
Sidee ayuu isku aadka u shaqeeyaa?Waa mid aad u sahlan, kooxaha kaalinta 1aad kaga soo baxay group-yadooda ayaa ku dhacaya kooxaha kaalinta labaad kaga soo baxay group-yadooda.
Laakiin sharuud ayaa ku xiran, kooxihii isku group soo ahaa iskuma dhici doonaan, halka kooxaha isku wadanka ah ay iyagana isku arki doonin wareega 16ka.
Kooxaha ku soo baxay kaalinta 1aad ee group-kooda ayaa lugta h--e ee wareega 16ka ku ciyaari doona garoonka martida halka lugta labaad ay ku dheeli doonaan gurigooda.
Kooxaha u soo baxay isku aadka?Kooxaha kaalinta koowaad ku soo baxay: Arsenal, Napoli, Barcelona, Atletico Madrid, Monaco, Leicester City
Kooxaha kaalinta labaad ku soo baxay: Paris Saint-Germain, Benfica, Manchester City, Bayern Munich, Bayer Leverkusen
Kooxaha boosaskooda go’aansan doona: Borussia Dortmund iyo Real Madrid waa ay ka soo baxeen Group F laakiin kooxdii kaalinta koowaad ku soo bixi laheyd ayaa la go’aansanayaa caawa.
Midkood Porto ama Copenhagen ayaa kaalinta labaad ee Group G ku soo bixi doona.
Juventus waa ay ka soo baxday Group H laakiin waxa ay caawa u ciyaarayaan inay xaqiijistaan booska kaalinta koowaad, halka Sevilla iyo Lyon ay u dheelayaan u soo bixitaanka wareega 16ka.
Goormee la ciyaarayaa wareega 16ka?Champions League waxa uu fasax galayaa muddo labo bilood ah, lugta h--e ee wareega 16ka waxaa la ciyaarayaa 14-15ka Febraayo iyo 21/22 Febraayo, halka lugta labaad la ciyaari doono bisha March 7/8 iyo 14/15.
Miyay Arsenal Ku Guuleysan Kartaa Champions League Xilli Ciyaareedkan? Rio Ferdinand Ayaa Fekerkiisa Ka Dhiibtay.
​Daaficii h--e ee xulka England iyo Manchester United Rio Ferdinand ayaa aaminsan in inkastoo Gunners ay kaalinta koowaad uga soo baxday Group A inaysan hadana u tartami karin hanashada koobka Champions League xilli ciyaareedkan.
“Aniga ilama ahan” ayuu ku jawaabay markii la weydiiyay fursadooda ay ku qaadi karaan koobka.
“Waxaan qabaa inay wax weyn u tahay iyaga inay dib u heleen kalsoonidooda islamarkaana ciyaartoydooda keydka ay shaqo wacan qabteen.
“Laakiin tayo badan ayaa taala kooxaha kale ee koobkaan taasoo adkeyneysa inay u tartamaan.”
Ferdinand ayaase ugu baaqay Arsenal inay qandaraas cusub ka saxiixaan Mesut Ozil iyo Alexis Sanchez kuwaasoo 18 bilood ay uga harsan tahay qandaraaskooda haatan islamarkaana dalbaday mushahar kordhin xoog leh.
“Arsenal waa inay heshiiyo ka saxiixdo Ozil iyo Sanchez” ayuu yiri Ferdinand oo u hadlayay BT Sport.
“Waxaa jira wadahadalo qandaraas, 18 bilood ayaa uga hartay qandaraasyadooda. Haddii Arsenal ay ku fekereyso inay u tartanto wax koob ah, waa inay ka saxiixaan heshiisyo cusub.”
Lionel Messi Oo Ku Guuldareystay Inuu Jabiyo Rikoorka Gooldhalinta Cristiano Ronaldo Ee Wareega Group-yada Champions League
Goolkii furitaanka oo uu ka dhaliyay Borussia Monchengladbach kulankii xalay ayaa u dhaweeyay Lionel Messi inuu barbareeyo rikoorka gooldhalinta ugu badan ee laga dhaliyo wareega Group-yada Champions League-ga, balse xiddiga reer Argentina kuma guuleysan inuu barbareeyo ama dhaafo.
Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay 11-gool wareega group-yada tartanka Champions League-ga xagaagii lasoo dhaafay, Lionel Messi ayaana ku fashilmay inuu gaaro rikoorkaas madama uu ciyaaray kulankii ugu dambeeyay ee ay kooxdiisa ciyaarto wareegaan.
Marka laga soo tago inuu rikoorkaan ku fashilmay, xiddiga Barcelona ayaa ku dhawaaday rikoorka guud ahaan gooldhalinta Champions League-ga madama uu dhaliyay goolkiisii 93-aad halka Ronaldo oo caawa la ciyaaraya Borrusia Dortmund uu leeyahay 95-gool.
Rikoorkaan guud ahaaneed waa mid socon kara mudada labada ciyaariyahan ee tartankaan, mana la garan karo heerka uu gaari karo.